Ebe dị ọnụ ala na Spain: site na LIébana ruo Cuenca | Njem akụkọ
Louis Martinez | 20/05/2022 09:00 | Ebe njegharị, España
Chọta ebe dị ọnụ ala na Spain na-enyere aka mgbe niile. Ha bụ ebe jupụtara n'ọma, ihe ncheta na ezigbo gastronomy nke ga-eri anyị obere ego ga-eme ka anyị nwee mmasị na ọnụnọ anyị nke ukwuu.
Anyị nwere ike ịga na ebe ndị a na ezumike anyị. Mana, ebe ọ bụ na ha dị ọnụ ala, anyị nwekwara nhọrọ nke iji ha mee ihe mee mgbakpọ wee chọọ ebe ọzọ ị ga-anọrị ndị ahụ. N'aka nke ọzọ, anyị nwere ike ịhọrọ n'etiti oké osimiri na ugwu, n'etiti ugwu na ndịda ma ọ bụ n'etiti n'ebe ọwụwa anyanwụ na n'ebe ọdịda anyanwụ. Site na Asturias elu Andalusia ma site na Castile na Leon elu Catalonia, e nwere ebe ndị a dị ọnụ ala na Spain. Na-enweghị oge ọzọ, anyị ga-egosi gị nhọrọ n'ime ha.
1 Mpaghara Liébana na Picos de Europa
2 Ávila, ebe dị ọnụ ala na Spain na Castilla y León
3 Benidorm na obodo ndị ọzọ na Costa Blanca
4 Mojácar na isi ihe ndị ọzọ na mpaghara Almería
5 Cuenca na obodo ndị ọzọ dị n'ime ime obodo, ebe dị ọnụ ala na Spain
Mpaghara Liébana na Picos de Europa
Obodo niile kwụụrụ onwe nke Cantabria Ọ bụ ihe ịtụnanya na-enye gị ohere ịnụ ụtọ oke osimiri na ugwu n'otu ụbọchị ahụ. N'ime nanị ọkara awa n'ụgbọ ala, ị nwere ike isi n'otu ebe gaa n'ọzọ. N'otu aka ahụ, ọ na-enye gị nhọrọ nke ịmata ọmarịcha obodo dịka oge ochie santillana del mar ma ọ bụ ihe ncheta Ngwakọta. Ihe a niile na-echefughị ​​isi obodo ya, nke mara mma Santander.
Mana anyị ahọrọla mpaghara Liébana maka njem anyị na-aga ebe dị ọnụ ala na Spain, ma maka ọnụ ahịa ya dị mma yana ịma mma ya, ọkachasị ma ọ bụrụ na-amasị gị ugwu. Ọ bụghị n'efu, a na-agbanye ya na ọmarịcha Ugwu Europe.
N'ime ọtụtụ ụzọ ugwu ị nwere ike ime na mpaghara ahụ, anyị ga-ekwu banyere nke na-agafe na-enweghị atụ. Ugwu Hermida, nke na-enye gị ọmarịcha echiche. Ma ọ bụ ndị na-amalite na echiche nke Waya, nke ị nwekwara ike iji ụgbọ ala USB gbagoo Isi mmalite nke. Dịka ọmụmaatụ, ụzọ a na-akpọ ụzọ nke ọdụ ụgbọ mmiri Pembes ma ọ bụ nke na-eduga na Sotres, ugbua na Asturia.
Mana ị nwekwara ihe ncheta ị ga-eleta na mpaghara Liébana. Na mara mma ncheta Villa nke Iko, kwupụtara saịtị nka nka, ị nwere Ụlọ elu etiti oge ochie nke Infantado na chọọchị nke San Vicente, nke jikọtara Gothic, Renaissance na Baroque styles. Maka akụkụ ya, na Chameleno ị nwere akụkọ ihe mere eme na ọmarịcha ebe obibi ndị mọnk nke Santo Toribio de Liébana, otu n'ime ebe nsọ maka Iso Ụzọ Kraịst na nke nwere ihe ncheta nke Lignum Crucis. Dị nso, n'otu aka ahụ, bụ Cueva Santa, ebe, dị ka akụkọ mgbe ochie, senti lara ezumike nká na nke bụ pre-Romanesque n'ụdị.
N'ikpeazụ, na Nnukwu isi Liébana ị nwere Romanesque Church nke Santa Maria na na onye ara la Hermitage of Our Lady of the Assumption. Ma, karịa ihe niile, buru n'uche na, site na mpaghara ahụ, oku na-aga Iezọ Lebaniega, nke jikọtara Camino de Santiago nke dị n'ụsọ oké osimiri na nke French. N'ikpeazụ, ahapụla mpaghara ahụ n'achọghị stew dị ụtọ na nke na-ebukwa aha Lebaniego.
Ávila, ebe dị ọnụ ala na Spain na Castilla y León
Echiche nke Ávila, ya na mgbidi ochie ya
Obodo niile kwụụrụ onwe nke Castile na Leon na-enye gị ebe ị ga-anọ ụbọchị ole na ole maka obere ego. Mana anyị ahọrọla obodo Ávila maka uru akụkọ ihe mere eme ya, ọtụtụ ihe ncheta ya na ọmarịcha anụ ụlọ.
Ebe etiti akụkọ ihe mere eme kwuputara saịtị ihe nketa ụwa, akara ukwu nke obodo Castilian bụ nke ya ochie mgbidi Ụdị Romanesque ma chekwaa nke ọma. N'iji otu n'ime cubes ya mee ihe, nke dị ebube Katidral nke Kraịst Onye Nzọpụta, nke bụ Gothic mbụ nke ndị e wuru na Spen. N'otu aka ahụ, gburugburu ya, ị nwere ike ịhụ ụlọ ndị mara mma dị ka Mansión de Los Velada, ma ọ bụ obí Valderrábanos na Rey Niño.
Ihe atụ ọzọ dị egwu nke ụkpụrụ ụlọ okpukpe nke Avila bụ Basilica nke Saint vincent, Romanesque sitere na narị afọ nke XNUMX. Ma anyị nwere ike ịkpọ aha ọtụtụ ndị ọzọ, ndị dị otú ahụ bụ nnukwu akụ nke obodo. Dị ka ihe atụ, ụka San Pedro na Santiago, Royal Monastery nke Santo Tomás, ebe obibi ndị nọn nke San José na La Encarnación ma ọ bụ hermitage nke San Segundo na San Martín.
Anyị nwere ike ịgwa gị otu ihe ahụ gbasara ihe nketa obodo nke Avila. Anyị akpọtụla ụfọdụ n’ime obí ndị ị pụrụ ịhụ n’akụkụ katidral ahụ. Ma obodo ahụ nwere ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ bụ ikpe nke Obí nke ugo, nnukwu ụlọ na narị afọ nke XNUMX; nke ndị Davidas, onye nke kacha ochie sitere na XIII; nke Bracamonte, jikọtara ya na Puerta del Mariscal, ma ọ bụ nke ndị deans, ya na ọmarịcha Plateresque facade.
N'ikpeazụ, ahapụla Ávila n'achọghị steak ya a ma ama, agwa Barco ya na, dị ka ihe eji megharịa ọnụ, Santa Teresa yolks a na-amachaghị nke ọma, nri nke na-enweta aha ya n'aka onye nsọ na onye omimi sitere na Avila.
Benidorm na obodo ndị ọzọ na Costa Blanca
Echiche panoramic nke Benidorm
N'agbanyeghị na ndị njem nlegharị anya na-ewu ewu, Benidorm bụ otu n'ime ebe ndị dị ọnụ ala na Spain, ọkachasị maka ụlọ oriri na ọṅụṅụ ya. A maara dị ka "New York nke Mediterranean" maka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụlọ elu ya, n'obodo Alicante ị nwere ike ịnụ ụtọ osimiri atọ mara mma: ndị nke Levante, Poniente na Mal Pas, bụ́ ndị a gbakwụnyere n’ọgba nke Tío Chimo na La Almadraba.
Ma ị nwekwara ike ịnụ ụtọ hiking ụzọ n'akụkụ oyi kpọnwụrụ saw, nke, na-achọsi ike, àgwàetiti Benidorm bụ ugwu ukwu. Na, karịa ihe niile, mara ọmarịcha ndụ abalị nke obodo ahụ.
Banyere ihe ncheta ya, gaa na chọọchị nke San Jaime na Santa Ana, ihe owuwu neoclassical nke narị afọ nke iri na asatọ mere ka ọ bụrụ ụlọ Virgin nke Suffrage, onye nlekọta nke Benidorm. Otú ọ dị, ihe dị ịrịba ama n'ihi akụkụ ha bụ skyscraper nke anyị gwara gị okwu. N'etiti ha pụtara na Intempo, ya na gigantic M udi; Neguri Gane, ya na mbara ala ọkara ya, yana Gran Hotel Bali, nke nwere ala iri ise na abụọ.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị na-ahọrọ ebe dị jụụ, ị nwere ike ịhọrọ obodo ndị ọzọ na Costa Blanca nke sokwa na ebe dị ọnụ ala na Spain. Ọmụmaatụ, Calp, na ọmarịcha Peñón de Ifach; Altea ya na chọọchị Ọtọdọks ya pụrụ iche; Torrevieja, ama ama maka ọnụ ụlọ nnu na osimiri, ma ọ bụ Denia, nke nnukwu ụlọ ya dị egwu na-echekwa ya.
Mojácar na isi ihe ndị ọzọ na mpaghara Almería
Mojácar, otu n'ime ebe dị ọnụ ala na Spain na mpaghara Almería
N'obodo ndị dị n'ógbè Almería, ihe yiri nke ahụ mere n'ihe anyị gwara gị banyere Costa Blanca. Ndị njem na-agakarị ha, mana ha nwere nnukwu ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Ọ bụ ya mere ha ji dị ọnụ ala. N'ime ha, anyị ahọrọla Mojácar maka ọmarịcha ya osimiri, ọ dịghị ihe na-erughị isii na niile na Blue ọkọlọtọ. Ha bụ nke El Cantal, El Descargardor, Lance Nuevo, Marina de la Torre, Venta del Bancal na Piedra Villazar.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị na-eme mmiri mmiri, nke a bụ mpaghara nwere oke. Oku Oke osimiri Levante Almeriense Ha na-agbakọta ihe dị ka kilomita iri ise nke oke osimiri nke pụtara ìhè maka ụdị dị iche iche ha na nnukwu ahịhịa ndụ nke posidonia oceanica.
Banyere ihe ncheta, ị nwere ike ịhụ ebe ndị mgbe ochie dị ka nke dị n'ime ya ikpo, site na Ọla kọpa Age. Na kwa nke chọọchị Santa Maria, nke e wuru na narị afọ nke 1980 na-eji masonry na ashlars. Otú ọ dị, n'ime ya pụtara ihe ịchọ mma nke German Michael Sucker, mere na XNUMX.
N'otu aka ahụ, na gburugburu Mojácar ị nwere ihe nchebe nke Enlọ Macenas y Ụlọ elu Atalaya del Peñon. Mana, ọ bụrụ na-amasị gị ịhọrọ obodo ọzọ dị na Almería, ị nwere ike họrọ nke njem nlegharị anya Roquetas de Mar, ya na Castillo de Santa Ana dị egwu, bụ́ ebe e wughachiri ewughachi na nso nso a site na njedebe nke narị afọ nke XNUMX; maka Carboneras, na Natural Park nke Cabo de Gata-Níjar, ma ọ bụ, ọ bụrụ na-amasị gị ezumike n'ime obodo. Velez-Blanco, ya na nnukwu ihe nketa ya nke Castillo de los Fajardo na-elekọta ya.
N'ikpeazụ, ahapụla ógbè Almeria na-agbalịghị tabernero ( ratatouille na-esi ísì ụtọ ) ma ọ bụ ezigbo azụ azụ. Na, maka eji megharịa ọnụ, otu mpempe hornazo dị ụtọ.
Cuenca na obodo ndị ọzọ dị n'ime ime obodo, ebe dị ọnụ ala na Spain
Ụlọ ndị dị na Cuenca
Kpọmkwem, ọ bụrụ na-amasị gị njem omenala, obodo nke peninsular ime bụ otu n'ime ọnụ ala ebe na Spain na ha nwere ọtụtụ ihe na-enye gị. Anyị ahọrọla Cuenca, mana anyị nwere ike ịgwa gị otu ihe ahụ Soria, Logroño o Zamora, dịka ọmụmaatụ.
N'obodo Cuenca, ndị ụlọ kpọgidere, nke a na-akpọkwa del Rey, bụ́ nke yiri ka ọ̀ na-ele anya n’ebe dị elu nke osimiri Huécar. Ugbu a, a na-echekwa atọ, ndị e debere n'agbata narị afọ nke XNUMX na nke XNUMX. Mana Cuenca bụ saịtị ihe nketa ụwa maka ọtụtụ ihe ncheta ndị ọzọ. N'ime ndị a, ọ dị oké ọnụ ahịa Katidral nke Saint Mary na Saint Julian, nke bụ otu n'ime ihe atụ mbụ nke Spanish Gothic.
Tinyere ya, ihe nketa okpukperechi nke obodo ahụ bụ ụlọ ụka dịka nke San Andrés, San Miguel ma ọ bụ San Nicolás, ebe obibi ndị dị ka nke San Pablo, de la Merced ma ọ bụ de las Petras na ebe obibi ndị mọnk dị ka nke Concepción Franciscana ma ọ bụ de las Madres Benedictines.
Maka ndị nkịtị, anyị na-adụ ọdụ ka ị gaa na obodo Castilla La Mancha the Episcopal obí, nke nwere ụlọ ihe ngosi nka nke Diocesan; nke ụlọ elu mangana, nke dị na mpaghara Mudejar ochie; nke Ụlọ ime obodo na ime obodo na San Antón na San Pablo àkwà mmiri. Ihe a niile na-echefughị ​​ihe a na-akpọ "skyscrapers". Ha bụ ihe e wuru nke nanị ala atọ ma ọ bụ anọ, bụ́ ndị nwere ọtụtụ ndị ọzọ n’azụ n’ihi na, dị ka ụlọ ndị e kowere, ha na-ele anya n’elu ọwa mmiri Huécar.
N'ikpeazụ, anyị egosiwo ụfọdụ ebe dị ọnụ ala na Spain. Ma anyị nwere ike ịgwa gị gbasara ọtụtụ ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, obodo ndị dị n'ụsọ oké osimiri Asturian dị ka Cudilero o Luarca; obodo ndị dị n'agwaetiti Mallorca dị ka Alcúdia y Ọkpụkpụ pollensa ma ọ bụ n'ime Ógbè lerida ya na obodo ochie ya na ihe nketa Romanesque ya. Ị naghị eche ebe ndị na-atọ ụtọ ịga?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » España » Ebe dị ọnụ ala na Spain
Njem ogologo? Ndị a bụ ngwa na ngwa agaghị efu n'ime ụgbọ ala gị